wordpress ကို MU ကို
version 0.7.4 – အဆိုပါ springy ဗားရှင်း
ဇွန်လ 4, 2011 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု 8 comments
ဒီ Release နှောင်းပိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ဇယားကိုအပေါ်နည်းနည်းကြွလာ. သို့သော်ထိုသို့ရှိပြီးသားကိုဖြတ်ကူးခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ရက်အတွင်း download, စံချိန်ကိုချိုးဖျက် 500 အမှတ်.
သဘာဝတွင်အငယ်စားပေမဲ့ဒီ Release တချို့ကောင်းတဲ့ဖြည့်စွက်ရှိသည်မ.
ပဌမ, Transposh အတွက်သတ်မှတ်ထားခြင်း default ဘာသာစကားယခုအခါ WP_LANG အဆက်မပြတ်အတွက်သတ်မှတ်ထားသောတပြောင်းရန်အတွက်သုံးပါတယ်, ဒီတိုင်းဆိုဒ်ကို backend အပေါ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားတွင်စီမံခန့်ခွဲနိုင် MU ကို installation လုပ်သော WordPress ကိုခွင့်ပြု. နောက်ဆုံးတော့ငါ့ဆိတ်သငယ်ကိုသူစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့်ဘာသာစကားမှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်ရှိသည်ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်ပျော်မွေ့ခဲ့သည့် A feature ကို.
ကျနော်တို့ကို output လက်ရှိ transposh ဘာသာစကားအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်တဲ့ tp shortcode ဆက်ပြောသည်ပါပြီ, အလွန်ကဲ့သို့မြည်မပြုစေခြင်းငှါပေမဲ့, ဒီသေးငယ်တဲ့ဖြည့်စွက်ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးကွဲပြားခြားနားသောရုပ်ပုံများကိုပြနေတဲ့ခွင့်ပြု, သင်ကအကြောင်းဖတ်ရှုနိုင် ဒီမှာ.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ parser ကို code ထဲမှာအနည်းငယ်အဆက်မပြတ်တခုရဲ့အပြင်, ယခု coders ခွင့်ပြု (မသုံးစွဲသူများ) ပိုကြီးတုံးပေါ်တိုကိုချိုးဖျက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ parser ကိုအမူအကျင့်ပြောင်းလဲပစ်ရန်, စာရွက်စာတမ်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ parser.php ၏ထိပ်ကိုမြင်ရ.
ပိုပြီးအပြောင်းအလဲများနှင့် bug ကိုသံကိုင်းကိုထည့်သွင်း:
စာမျက်နှာများအတွင်းရှိထည့်သွင်း iframe ယခုသင့်လျော်သောဘာသာစကားထည့်သွင်းဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်
တစ်ခုတည်းသော = သုံးပြီးနှင့်အတူပုံသေ bug ကို”နှင့်” Tag သီးသန့်အတွက်နောက်ထပ်အရင်းအမြစ်ဘာသာစကား၏မမှန်ကန်သော detection လုပ်ခဲ့သော tp shortcode ၏ parameter က
မှ Jenny Beelens အားဖြင့် Added ဂျာမန်ဘာသာပြန်ချက် professionaltranslation.com
ဒီဗားရှင်းကိုခံစားပျော်မွေ့, အဲဒီအကြောင်းသင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပြ, ဘာမှမသင်တို့၏ရန်သူများကိုမပြောကြဘူး, သင်အမှန်တကယ်လုပ်ချင်တဲ့နှင့်သင့်မိသားစုများ၏အရေးပါမှုကိုမမေ့မလြော့ပါလျှင်သင့်ရှေ့နေများနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေး.
သည် PS: ကျနော်တို့စီစဉ်ထား Google ကအကြောင်းသိ API ကို deprecation နှင့် plugin ကို Translate နေဆဲအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်, အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအနာဂတ်ဗားရှင်းအတွက်အဝတ်မခြုံဘဲလိမ့်မည်.
အောက်တွင်တင်သွင်း: အထွေထွေမက်ဆေ့ခ်ျများ အတူ Tagged: 0.7, အသေးအဖွဲ, လွှတ်ပေး, wordpress ကို MU ကို, wordpress မှာ plugin